Amnesty International Itoophiyaan kan hidhaman akka gadilakkistu, mormitootas burkuteessuu akka dhaabdu gaafate - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Amnesty International Itoophiyaan kan hidhaman akka gadilakkistu, mormitootas burkuteessuu akka dhaabdu gaafate
Amnesty International Itoophiyaan kan hidhaman akka gadilakkistu, mormitootas burkuteessuu akka dhaabdu gaafate
Akka ibsa Amnesty International (AI index 25/009/2014) sadaasa 10, 2014 baasetti, Sadaasa 5 fi 6, 2014 humnoonni nagaa fi tasgabbii biyyattii Finfinnee (FFN) keessatti naannoo namoota 90 hidhaniiru. Kuni kan ta’e yeroo gamtaan dhaabilee mormitootaa sagal hiriira mormii FFN keessatti geggeessuuf yaalanitti. Hidhaan kuni ,akka ibsa AI, hammeenya mootummaan mormitoota isaa irraa qabu calaqqisiisa. Amnesty international mootummaan Itoophiyaa namoota hiriira nagaa kanaan wolqabatee hidhamanii fi kanniin yaada isaanii karaa bilisaa fi wolba ta’een ibsataniif qofa hidhaman hunda hatattamaan gadi dhiisuu qaba jedha.
Laakkofsi namoota hidhamanii qajeelatti kan hinbeekamne ta’uu mul’isa ibsi AI . Garuu paartiin ‘Semayawi’ namoonni 75 irraa hidhamuu dubateera- dura taa’aa paartii kanaa Yiliqaal Geetinnat dabalatee. Yiliqaal hidhamuun alatti rukutamuu fi madaayuun isaas gabaafameera. Hooggantoonni dhabbilee biraas hidhamuun isaanii ibsameera.
Hidhamtoonni hedduun kan hidhaman ‘sostegna’ fi Carqoositti. Kanniin Kotobetti hidhamnis jiru, akka ibsa AI tti. Worra hidhaman irratti himannaan heera kuffisuuf yaalii godhuu, hiriira nagaa seera-dhabeessa irratti hirmaatuu fi qabeenya mootummaa barbadeessuuf yaaluu jedhu mootummaan irratti banameera.
Bifuma wolfakkaatuun Kongiresiin Federaala Oromoo baatii Caamsaa fi Adoolessa bara kanaa jidduti miseensonni 350 hanga 500 ta’an irraa hidhamuu ifa godheera. Paartiin ‘Semayawi’ woggaa kana keessatti namoonni heddu irraa hidhamuu isaati kan dubbatu, akka ibsi AI baase agarsiisutti.
Hundi namootaa miseenssa dhaabbilee mormituu ta’aniif, hiriira nagaa bahaniif, yaada mormii dhiheessanii fi hojii gaazexeessummaa irratti bobba’aniif qofa mana hidhaatti darbaman hundi hatattamaan gadi lakkifamuu qaban jedha ibsi Amnesty International.
Previous articleDubartiin Itoophiyaa Sa’udii Arabiyatti daa’ima wowworaantee du’aaf saaxilte du’aan adabamte: Lammiin biroos AK tti ajjeefame
Next articleQabxiilee 12 jaalala cimsan, jireenya midhaagsan